Joany avy any Patmosy - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Joany nanoratra ny apokalipsy)
I Masindahy Joany ao Patmosy, sary nataon'i Diego Vélasquez.
I Joany avy any Patmosy na Jaona avy any Patmo na Joany Mpahita na Jaona Mpahita dia anarana omena ny mpanoratra ny Bokin'ny Apokalipsy izay milaza ny tenany inefatra amin'ny anarana hoe "Joany" na "Jaona". Tokony ho tany amin'ny taona 95 any ho any no nanoratany. Ny mpanoratra ny Apokalipsy dia tsy namela zavatra ara-tantara ary ireo lovantsofina momba azy dia mifanohitra hatramin'ny vanimpotoana nanombohan'ny kristianisma.
Araka ny fikarohan'ireo mpamakafaka lahatsoratra dia mety nanoratra tamin'ny fiteny arameana na tamin'ny fiteny hebreo i Joany, ka mahatongna ny petra-kevitry ny mpikaroka izay manao azy ho mpaminany jodeo-kristiana mitety tanàna ho marina. Araka io petra-kevitra io dia nandositra an'i Palestina i Joany tamin'ny fisian'ny fikomiana jiosy tamin'ireo taona 60 sady mety nialokaloka tany Azia Minora (angamba tany Efesosy na Efezy), alohan'ny hanaovana sesitany azy any Patmosy na Patmo, noho ny faneren'ny "fanenjehana nataon'i Domitiano" (araka ny lovantsofina), nefa ny fahamarinan'ity lovantsofina ity dia mbola mampiady hevitra ny mpahay tantara.
I Masindahy Joany Evanjelista ao Patmosy, sary nataon'i Jheronimus Bosch.
Mety olona nana ny maha izy azy tao amin'ny fiangonana jiosy-kristiana tany Azia Minora tao ami'ireo Fiangonana fito izay anoratany izy, ka ilazana azy ho mpaminany mandehandeha. Ny fifandraisan'io mpanoratra io amin'ny lovantsofina sy ny fiangonan'i Joany dia iadian-kevitra. Ny ankamaroan'ny mpilaroka anefa mirona amin'ny tsy fampifandraisana an'i Joany avy any Patmosy amin'ny firehana johanika, na dia mety nisy ihany ny fihaonan'izy ireo.
Ny fampitovian'ny lovantsofina ny mpanoratra ny Apokalipsy amin'i Joany Evanjelista na amin'i Joany Apostoly dia niteraka fanaovana tsanganasa kanto natokana ho azy. Niteraka aingam-panahy teo amin'ny mpanao hosodoko maro toa an'i Bosch sy i Vélasquez izany.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Joany_avy_any_Patmosy&oldid=977448"
Voaova farany tamin'ny 19 Novambra 2019 amin'ny 19:32 ity pejy ity.